Yahya Jammeh iyo madaxda kale ee lagu eedeeyay in ay dheceen hantida dowladed | Baydhabo Online
Yahya Jammeh iyo madaxda kale ee lagu eedeeyay in ay dheceen hantida dowladed
In kabadan 11 milyan ayaa la sheegay in laga la’yahay kaydka dawladda Gambia ka dib markii uu xilka ka dagay madaxwaynihii wakhtiga dheer xilka hayay Yaya Jammeh, kaas oo xilka ku sii dhaganaa ku dhawaad labo bilood inkastoo doorashada lagaga guulaystay bishii bishii Desembar.
Jameh ayaa hadda loo malaynayaa in uu ku sugan yahay dalka Equatorial Guinea, mase aha masuulkii u horeeyay ee jeebabkiisa ku shubta dhaqaalaha dawladda, xaqiiqaduse waxay tahay qaar badan ayaaba qaatay lacag intaas ka sii badan. waa kuwan qaar ka mid ah kuwii ugu darnaa.
Sani Abacha wuxuu Nigeria soo hogaaminayay 1993 ilaa 1998, waxaana la sheegay in uu dhacay inta u dhaxaysa 1 bilyan illaa 5 bilyan oo doolar oo dhaqaalaha dalkiisa ah isaga oo sameeyay codsiyo ku saabsan maalgalin been abuur ah. Sanadkii 2014kii waaxda cadaaladda ee dalka Maraykanka ayaa sheegtay in ay fariisisay 450 milyan oo doolar oo ka mid ah hantidii uu xaday Abacha
Suharto, wuxuu ahaa madaxwaynaha dalka Indonesia 1967 ilaa 1998 waxaa lagu eedeeyay in uu xaday hanti dawladeed oo gaaraysa 35 bilyan oo doolar. Sanadkii 2000 waxaa lagu xukumay xabsi guri waxaana lagu soo oogay in uu xaday 570 milyan oo doolar isaga oo adeegsanaya hay’ado gargaar oon been abuur ah. Laakiin dhakhaatiirta maxkamadda ayaa sheegay in uu aad u xanuun san yahay oo uusan maxkamadayn awoodin, isla sanadkaas 2000 ayuuna geeriyooday.
Hogaamiye ayuu ka ahaa dalka Zaire oo hadda la loo yaqaano Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ah ee Kongo, wuxuu xilka hayay 1965 ilaa 1997, xukuumadda Mobutu ayaa ahayd mid gacan kulul oo cadaadis badan u gaysatay mucaaradka, nolol wanaagsan ayuuse ku noolaa isaga oo adeegsanaya dhaqaalaha shacabka, hanti badan ayuuna caalamka ka samaystay waxaana ka mid ahaa guri qasri ah oo soddon qol ka kooban oo uu ka dhistay magaalda Lausanne kaas oo lagu qiimeeyay 5.5 milyan oo doolar, waxaa looga shakiyay in uu dhacay hanti gaaraysa 5 bilyan oo doolar.
Kabaha uu qof kaste xasuusto – Imelda oo ah xaaska Marcos ayaa kabaheeda lagu qiyaasay 3,000.
Arrintaas ayaana astaan u noqota musuqmaasuqa hogaamintiisa Philippine ee intii u dhaxaysay 1965 ilaa 1986. Marcos ayaa lagu tuhmay in uu dalka ka xaday hanti gaaraysa 10 bilyan oo doolar mudadii uu xila hayay, dacwado badan ka dibna bangiyo Switzerland ku yaala ayaa ogolaaday in ay xukuumadda Philippine u soo celiyaan 700 oo milyan oo doolar.
Cali Cabdallah Salax, Yemen
Madaxwaynihii hore ee dalka Yemen Cali Cabdalla Salax ayaa looga shakisan yahay in uu aruursaday lixdan bilyan oo doolar intii uu xilka hayay, qiyaastaas oo ku dhaw hantida soo gasho dalkaas sanadkii, lacagtaas badankeed wuxuu ka sameeyay qandaraasyo shidaal. Xilka ayaa laga xayuubiyay sanadkii 2012kii ka dib kacdoondii Carabta, laakiin hadda wuxuu xulafo la yahay jabhadaha Xuutiyiinta. oo dagaal kula jira dawladda uu adduunku aqoonsan yahay.
Slobodan Milosevic, oo ahaa kaligii talis gacan kulul ayaa seerbiya maamulayay 1989 ilaa 1997, ayaa lagu oogay dambiyo la xiriira xasuuq, balse arrintaas ka hor waxaa loo xiray in uu lacago ka lunsaday Serbia. Lama hubo tirada rasmiga ah laakiin waxaa looga shakiyay in uu xaday 1 ilaa 4 bilyan oo doolar. 2006 ayuu geeriyooday isaga oo maxkamadayn ay uga socoto Hague.
Xusni Mubarak, Masar
Xusni Mubarak waxaa xilka laga tuuray 2011, waxaana lagu soo oogay in uu lunsaday lacago loogu talo galay in lagu dayactiro madaxtooyada uuna ku dhistay guryo uu gaar u leeyahay.
Mubaarak iyo wiilashiisa ayaa lagu helay in ay lunsadeen 17 milyan oo doolar muddo sideed sano ah. Waxaa lagu xukumay saddex sano, wiilashiisa Jamal iyo Alaa ayaa iyagan lagu xukumay min afar sano.
Bin Cali, Tunisia
Xil ka tuuritaankii Bin Cali ee sanadkii 2011ka ayaa billaw u noqday kacdoonkii Carabta. Cali iyo Xaaskiisa ayaana u qaxay Sacuudi Carabiya, laakiin maxkamad ayaa iyaga oo maqan ku xukuntay 35 sano oo xabsi ah iyaga oo loo haysto lunsi iyo sixun u isticmaal hanti dawladeed.
Dacwadiisu markii ay socotay dacwad oogaha ayaa sheegay in mid ka mid ah qasriyadiisa laga helay 27 milyan oo dahab iyo lacag dadwayne ah.